गाडी रोकेर पिसाव फेर्ने जङलमा लग्यो २ जना साथीले भाग्यौं भने पछाडि बाट लखेटे…. (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > गाडी रोकेर पिसाव फेर्ने जङलमा लग्यो २ जना साथीले भाग्यौं भने पछाडि बाट लखेटे…. (भिडियो हेर्नुस्)
मकवानपुर हेटौडा निवासी सरु पुडासैनी ,जसले आफ्नो श्रीमान हराएको झन्डै २ महीना पुरा भईसकेको थियो, काखमा बच्चा च्यापेर,आफ्नो श्रीमान खोजिदिनुहोला भेनेर आउनु भएको थियो । उहाले आफ्नो श्रीमानलाई सबैतिर खोज्नु भयो तर आफ्नो श्रीमान फेला पर्न सक्नु भएको थिएन ।
उहाको श्रीमान कामको सिलसिलामा रक्सोल जानुभएको थियो र एक्कासी पछाडिबाट एकजनाले रुमालले मुख बाधे र एउटा बन्द कोठामा लागे । त्यहा वहा जस्तै अरु थुप्रै मान्छेहेरुलाई पनि बन्दि बनाएर राखिएको रहेछ , अ प ह रणकारीहरुले समय समयमा कोठाहरु परिवर्तन गर्थे र दिनमा एक समय मात्रै खाना दिन्थे , एस्तै गरी अढाई महिना सम्म पिडा भोगेर बन्दि बनेर बसे ।
धुवासंगै सकियो कार्की परिवार, तेजबहादुर र कमलाको एउटा चि,’ता
विवादित व्यक्तिले समेत पदक पाएपछि पत्रकारद्वारा गरियो अस्विकार
सुटिङकै क्रममा यसरी फेरि अस्ताए अर्का कलाकार ‘म ट्टा रे’